हामी किन हार्यौं : तारानाथ लुईटेल (नेता,राप्रपा संयुक्त )
हाम्राेखबर बिहीबार, मङ्सिर १९ २०७६
काठमाडौं । राप्रपा प्रजातान्त्रिक र राप्रपा राष्ट्रवादीको जुन प्रकारले एकीकरण गरियो, जुन एकीएकरणबाट पार्टी ठूलो होला, जनताले विश्वास गर्लान, जिल्ला जिल्लाको कार्यकर्ताहरुको मनोबल उच्च राख्न सकिएला र यसबाट गाउँगाउँको संगठन बलियो होला, पार्टी मिलेको ८ महिनाको दौरानमा साधारण सदस्यहरु १० लाख सकृय सदस्यहरु २ लाख निर्माण गरिसक्नुपथ्र्यो । त्यो काम अध्यक्षद्धय पशुपति शम्शे र डा. प्रकाशचन्द्र लोहनीबाट ठाडो आदेश दिएर प्रदेश प्रमुखहरुलाई जिल्ला बस्न र संगठन गर्नका लागि पठाइएन् ।
गाउँ कमिटी र नगर कमिटी क्षेत्रीय कमिटी, जिल्ला कमिटीहरु निर्माण गर्न सकिएन । भएका केही कमिटीहरु कागजी घोडा मात्र भए त्यसलाई चेक एण्ड ब्यालेन्स गर्ने काम केन्द्रले गर्न सकेन । केन्द्रीय पदाधिकारी अझै नियुक्त गर्न सक्नु भएको छैन । त्यसैगरी ४५ वटा बिभागहरु निर्माण गर्न सकिएको छैन । यिनै कारणले उपनिवार्चनमा लज्जास्पद हार खानु पर्यो ।
हामी मरेका छैनौं, आउने दिनहरुमा नेतृत्व पंक्ति सच्चिएर तल्लो वर्गको जनताहरुसँग पुगेर विश्वास दिलाउने छौं ।
राजसंस्थासहित हिन्दु राष्ट्र किन ?
दुई सय ४० वर्षको राजसंस्था ५ हजार वर्षदेखि चलिआएको हिन्दु राष्ट्र, ९४ प्रतिशत ओमकार परिपवारहरु सबै धर्म बीच राजा र जनता बीचको सुमधुर सम्बन्धलाई ०६२÷६३ को आन्दोलन पश्चात टीका लगाएका सांसदहरुबाट कही कतै नआएको राजसंस्था र हिन्दु धर्मलाई पाखा लगाउने काम संविधानसभाबाट नै किन गरियो ? जनताको अनुमोदन बेगर ?
१३ देशमा राजासहितको प्रजातन्त्र छ । ती देशका जनताहरु सुखी छन । तर नेताहरु दुःखी छन । जस्तै जापान, बेलायत, थाइल्याण्ड, क्यानेडा, सिंगापुर, मलेशिया लगायत आदी देशमा राजासंस्था अहिले सबैको प्रिय छन । ७२ देश क्रिश्चियन धर्म मान्दछन् । त्यही धर्मले राज्य चलेको छ । ५२ देशहरुमामा मुश्लिम धर्मको बाहुल्यता छ । १३ देश बुध्द्ध धर्म मान्नेहरुको छ । एक मात्र हिन्दु धर्म मान्ने देश नेपाल मात्र हो । विश्वमा ३ अर्ब हिन्दुहरु छन त्यसको आस्थाको केन्द्र भनेको नेपाल नै हो ।
त्यसैले हाम्रो जस्तो कम बिकसित देश राजा बिनाको देश संभव नै छैन । बार्षिक ४ करोड राजालाई तलब भत्ता दिइन्थ्यो भने अहिले अनगिन्ती राजाहरु निस्किएका छन । अहिलेका छोटे राजाहरुलाई १६ अर्बभन्दा बढी लाग्दछ ।
राजा भएको भए देशमा यत्रो भष्ट्राचार हुदैन थियो तर अहिले जताभावि छ राष्ट्रको ढिकुटी सिध्याउनलाई र भ्रष्टाचार गर्नलाई । त्यही भएर पनि राजसंस्था देशमा अति आवश्यक छ । यसमा कांग्रेसका नेता वीपी कोइरालको भनाई पनि सान्दर्भिक छ । उनले भनेका थिए– राजसंस्था रह्यो भने देश रहन्छ, राजसंस्था रहेन भने विदेशीको अखडा नेपाल रहने छ ।
रथ यात्रा किन असफल ?
चुनावअघि राप्रपा संयुक्तले धार्मिकरथ यात्रा चलायो । तर त्यसले आम मानिसलाई आकर्षण गर्न सकेको देखिएन । यसमा नेतृत्व पंक्तिले ७७ जिल्लामा कुनै पनि सांगठनिक स्वरुप नबनाई र जिल्लाका कुनै पनि पदहरु गठन र सकृय नबनाई पार्टीले रथ यात्रामा हाम फाल्यो । सिमित कार्यकर्ता भएको कारण हामी तल्लो बर्गसम्म धार्मिक यात्राको बारेमा पुग्न सकेनौं । धेरै जनता र कार्यकर्ताहरुलाई धार्मिक रथ यात्राबारे थाहै रहेनछ । पार्टीमा ३६४ जना केन्द्रीय कमिटीमा छन । उनीहरु कतिपयलाई यसबारे जानकारी नै रहेनछ । यसमा पार्टी सचिवालयको कमजोरी देखियो । पार्टीले अनिवार्य उपस्थितिको लागि सूचना जारी गर्नूपर्ने थियो त्यो हुन सकेन । मुस्किलले ५०,६० जना मात्रै उपस्थित देखियो । त्यस्तै कार्यकर्ताको पनि उपस्थिति देखिएन । त्यही भएर नागरिहरुको उपस्थिति कम देखियो ।
नेतृत्व पंक्तिले पार्टीको मुद्धाहरुलाई रणनीतिक रुपले चट्टान झै उभिएर जनता माझ बचनवद्धाता रही संगठन निर्माण गर्न सकिएन भने यो पार्टी प्रजापरिषद जस्तो हुन बेर छैन । नातावाद, चाकरीवादलाई अन्त्य गर्दै इमान्दार कार्यकताहरुलाई अनुशासित बनाई नेतृत्व पंक्तिले मूल्याङ्कन गरेर पार्टीलाई अघि बढाउन सक्यो भने आगामी दिनमा जनताहरुले विश्वास गर्ने छन । र राप्रपा र राप्रपा संयुक्त एउटै अजेण्डामा हिडेको हुनाले दुवै पार्टीलाई एकीकरण गरेर जनता माझ गइयो भने मात्र पार्टीको भविष्य उज्वल हुनेमा विश्वास राख्दछु ।
(राप्रपा संयुक्तका नेता तारानाथ लुईंटेलसँगको कुराकानीमा आधारि¬त)